Injineer Yarisow oo ka hadlay arrin uu Thaabit ``ku baxay`` - BBC News Somali
Injineer Yarisow oo ka hadlay arrin uu Thaabit ``ku baxay``
Lahaanshaha sawirka Injineer Yarisow
Image caption Injineer Yarisow
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yarisow) oo ka hadlay magaalada Muqdisho aya soo hadal qaaday waxa sannadkan uu noqon doono maqaamka magaalada Muqdisho.
Injiner Yarisow aya sheegay in sannadkan 2019-ka uu yahay sanad laga tashan doono maqaamka magaalada Muqdisho iyo sidii dadka reer Muqdisho ay uga tashan lahaayen aayahadooda.
`` Sannadkan waa sannadkii u diyaar garowga doorashooyinka, sannadkii dhameystirka dib u eegista dastuurka, sannadkii maqaamka Muqdisho bulshadeeda aayahooda ay uga tashan lahaayeen oo ay ula mid noqon lahaayeen gobolada kale ee dalka''. Ayuu yiri Eng. Yarisow.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintani horay uga soo saaray qoraal uu ku caddaynayo in isaga oo qura uu guddoomin karo, go'aanna ka gaari karo maqaamka caasimadda, dhanka kalena wuxuu baarlamaanka ku baaqay in laga fogaado wixii keenaya xasilooni darro siyaasadeed.
Image caption War saxaafadeed
Injineer Yarisow ayaa sidoo kale soo hadal qaaday matalaada siyaasadeed ee gobolka Banaadir, waxaan uu yiri: `` Waa in sanandkan aan ka dhabeynaa in shacabka Muqdisho ay ku helaan matalaad hadii ay ahaan laheyd aqalka sare iyo golaha shacabka.
Yarisow ayaa intaa raaciyay in muddo ay soo dulqaateen, qaabka keliya ee sidaasi lagu gaari karo na ay tahay wadajirka iyo midnimada ummada Muqdisho.
Lahaanshaha sawirka Thabit Cabdi
Image caption Thabit Cabdi
Dastuurka ku meel gaarka ee soomaaliya ayaa dhigaya in caasimadda ay yeelaneyso maqam gaar ah, waxaase aan la ogeyn sida hadalkaasi uu uga dhabeyn doono guddoomiye Yarisow iyo saameynta ay ku yeelan doono.
Maqaamnka magaalada Muqdisho oo ah mid xasaasi ah ayaa waxay dad badan rumeysan yihiin inay kamid tahay waxyaabihii galaafatay guddoomiyihii hore ee gobolka Banadaair, Thaabit Cabdi, oo xilka laga qaaday bishii Janaayo ee ee sannadkii 2018, kaddib markii isaga iyo Madaxda dowladda federaalka ay isku khilaafeen maqaamka Muqdisho.
Taabit Cabdi Maxamed, wuxuu aad ugu ololaynayey in la qabto shir looga hadlayo maqaamka caasimadda, kaasoo ay ku taageersanaayeen qaar kamid ah beelaha u badan Muqdisho. Waxaa kale oo lagu kala boodsanaa qorshe uu waday Mudane Taabit kaasoo uu ku doonayey in amniga caasimadda la hoos keeno maamulka gobolka Banaadir.